नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : अमेरिकामा राम्रा र अशल मान्छे मात्र होइन यस्ता अराजकताबादीहरु पनि छन ! हेर्नुस यिनीहरुले अहिले चुनाव पछि शुरु गरेको आतंक । यिनीहरु को हुन सजिलै चिन्नुहुन्छ !!
अमेरिकामा राम्रा र अशल मान्छे मात्र होइन यस्ता अराजकताबादीहरु पनि छन ! हेर्नुस यिनीहरुले अहिले चुनाव पछि शुरु गरेको आतंक । यिनीहरु को हुन सजिलै चिन्नुहुन्छ !!
Posted by www.Nepalmother.com at 1:02 PM